Ngathi-iMestech Industrial Limited
Sitsalele umnxeba: 13530756565
Ziphene yokubumba kabini
Inkqubo eyahlulayo yokufa
Ukufa iindawo zokuphosa
Uyilo kunye neNdibano
Uyilo lwezindlu zombane
Uyilo lwezixhobo zasekhaya
Uyilo lwemveliso yeplastiki
Uyilo lwenxalenye yensimbi
Iingcebiso malunga nokuyila kweeplastiki kunye nokubumba
Uyila njani iinxalenye zeplastiki
Ulwazi ngomzi mveliso
Umenzi womngundo kunye nomboneleli wesisombululo, China
IMestech yasekwa ngonyaka ka-2009, ibiseShenzhen, iziko lemveliso yezorhwebo kumazantsi eTshayina. I-Mestech izinikezele ekubumbeni nasekuveliseni iinxalenye zeplastiki. Ngoku siyayandisa inkonzo yethu kuyilo lwemveliso, i-metal die casting, i-stamping kunye ne-machining. Sinikezela abathengi ngenkonzo yokumisa ukusuka kumalungu ukuya kwindibano yemveliso egqityiweyo.
Amalungu eplastiki kunye namalungu esinyithi kunye neemveliso esizivelisayo zigubungela iinkalo ezininzi.Zibandakanya iMizi-mveliso, ezonyango, ezombane, ezombane, umbane, izixhobo ezizenzekelayo, izixhobo zasekhaya kunye neemveliso zabathengi. Sisoloko sidlula kulindelo lwabathengi bethu ngokuxhobisa bonke abo sinxulumana nabo kunye nokwenza inkcubeko eyamkela ukuphucuka, ukuvelisa okungumtya kunye nentsebenziswano yokubonelela ngeenkonzo ukuqinisekisa ixabiso liphezulu kubathengi bethu.
Ukusukela oko yasekwa, iMestech izibophelele ekunikezeleni abathengi ngeemveliso ezifanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu kunye neenkonzo. Sineqela lobungcali leenjineli, oomatshini abaxhotyiswe kakuhle kunye nenkqubo yolawulo efanelekileyo. Sisoloko sisebenzisa itekhnoloji entsha kunye neendlela zolawulo zokuqokelela amava kwimveliso yeplastikhi yokuvelisa, ukuvelisa inaliti, ukusika isinyithi, uyilo lwemveliso kunye nendibano yemveliso ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Ngamandla akhokelayo, kubonakala ikakhulu kwezi zinto zilandelayo:
Iqela lethu leenjineli
Iinjineli zethu zinamava atyebileyo kuyilo nakwinkqubo yokuvelisa iinxalenye zeplastiki, iinxalenye zesinyithi kunye nokubumba. Basebenzisa isoftware ukuyila ukungunda kunye neemveliso. Bayakwazi ukubonelela abathengi ngoyilo lweemveliso, uhlalutyo olunokwenzeka, uvavanyo lomngcipheko kunye nezisombululo.
Iinjineli zeMestech zingasebenzisa ngobuchule i-UG, i-ProE, iMoldflow kunye nezinye iisoftware zoyilo kunye nokuhlalutya. Ukubumba senza izigubungelo ezizenzekelayo, izixhobo zezixhobo zonyango, izixhobo zemveliso ye-elektroniki, izixhobo zombane zasekhaya, umbane wamashishini, ukhuselo lokusingqongileyo kunye neemfuno zemihla ngemihla. Siyakwazi ukuyila nokuvelisa i-HASCO kunye ne-DEM yokubumba esemgangathweni ngokweemfuno zomthengi, kwaye sizithumele kwamanye amazwe nakwimimandla.
Iinjineli zeMestech zingasebenza kunye nabathengi ukubonelela ngenxalenye yeplastikhi kunye noyilo lwenxalenye yesinyithi yeemveliso zombane kunye neemveliso zombane, kwaye benze uhlalutyo olunokwenzeka, baxoxe kwaye bafumane iingxaki kwaye banike iingcebiso zokuphucula, kunye noyilo lokungunda kunye nokuvelisa kula manqanaba alandelayo.
Sineqela lobunjineli, bayila uyilo lwemveliso kunye nokuyilwa kwesikhunta kunye nokulandelelwa kweprojekthi. Ukuba uneprojekthi entsha ezandleni zakho ekufuneka ziphuhlise ukungunda kweplastiki kunye neenaliti ezibunjiweyo, nceda unxibelelane neqela lethu lobuchwephesha, siya kuyiphonononga idatha yakho kwaye sikuthumele isindululo esithile sokwakha uyilo lwenxalenye yakho, oku kuya kuqinisekisa ukuba iprojekthi yakho iya kuba yimpumelelo ngexesha lokuvelisa ukungunda kwaye ugcine ixesha elininzi lokwenza ukungunda.
Umzi mveliso wethu kunye nezixhobo
Umngundo kunye nenaliti yokubumba kunye nokufa kwesinyithi kuxhomekeke kakhulu kwinqanaba lezixhobo.
Kwiworkshop yokubumba, ukongeza kwiinjineli zoyilo lobuchwephesha, iinjineli zenkqubo kunye neenkosi zomngundo, inkampani yethu ilandelela itekhnoloji yokuqhubekeka yangoku, exhotyiswe ngezixhobo eziphambili zomatshini we-CNC, oomatshini bokwenza iintlantsi ze-EDM, izixhobo zomatshini wokusika ucingo. Isantya sokusebenza kwesantya esiphezulu somatshini wethu we-CNC sinokufikelela kwi-24000rpm.
Ukongeza kwiindidi ngokubanzi zesikhunta, sikwenza imibala emibini yenaliti, setha ubumba kunye nokufaka ukungunda, ukuqaqambisa ukungunda, nokwenza umngundo omkhulu ngaphakathi kweemitha ezi-3.
Indawo yokusebenzela inaliti
Ngokuphathelene nenaliti yokubumba, sinabo oomatshini bokubumba inaliti ukusuka kwiitoni ezili-100 ukuya kwiitoni ezingama-2000, imibala emibini yoomatshini bokubumba inaliti kunye noomatshini ohamba ngesantya esiphezulu. Ukongeza ziphene yokubumba iinxalenye zeplastiki ubungakanani ngokubanzi, sinako ukuvelisa iinxalenye umbala-mbini, izahlulo obhityileyo-udonga kunye namalungu ezinkulu-ubungakanani. Iinxalenye ezibunjiweyo zinokufikelela kwiimitha eziyi-1.5 ubude kwaye elona nxalenye licekeceke linokuba yi-0.50 mm
Sinoomatshini bokufaka i-32 apho imikhosi yokubotshwa kwemigangatho igubungela i-90T ~ 2000T, umatshini wenaliti kabini, kunye nabasebenzi abangama-50 ~ 60. Umthamo wemveliso 1.5 yezigidi zenyanga ngenyanga.
Kwicandelo lesinyithi bokwakha, sinako ukubonelela imveliso eyahlulayo die zinc ingxubevange kunye aluminium ingxubevange, kwakunye machining ngqo ezinye iindawo zesinyithi. (Nceda ubhekise kwiphepha "lokuphosa iintsimbi" kunye ne "CNC machining" ngeenkcukacha.)
Ulawulo lwemveliso efanelekileyo
Sazisa ngolawulo lweprojekthi kunye nenkqubo ye-ERP kwimveliso nakwinkqubo yokuvelisa. Ngokweemfuno zabathengi, senza isicwangciso sexesha kwaye sisebenzise inkqubo ngakumbi kuyilo, ukuthengwa kwezinto ezibonakalayo ukuqhubekeka, ukuvelisa, ukuhlolwa kunye nokuthunyelwa, ukwenzela ukunciphisa ixesha lokwakha kunye nokunciphisa indleko zesikhunta sakho kunye nemveliso.
Inkqubo yethu esemgangathweni
Umgangatho luphawu olubalulekileyo lokuqinisekisa ukusebenza kweemveliso. Sisekele inkqubo esemgangathweni esemgangathweni kunye neenkqubo ezisemgangathweni kunye nemigangatho yokuqinisekisa ukuba iimveliso ezivelisiweyo ziyahlangabezana neemfuno zabathengi, kunye nokuqinisekisa ukuba imveliso yeemveliso ezifanelekileyo kubathengi. Faka
Kwinqanaba lokuvelisa ukungunda, besitshekisha ngokubonakalayo umgangatho ukusukela kuyilo lokungunda
1. Uhlalutyo lolwazi lweemfuno zabathengi
2.Ukuphononongwa koyilo lokulunga komngundo
3.Ukuyilwa kwesilingo somngundo
4.Umbumba wokugqibela uyilo lokuqinisekisa
5. Uhlolo olungenayo lwesinyithi sokubumbela
6.Ukulinganisa umlinganiso wobungakanani
7. Imilinganiselo yokukhutshwa kobungakanani be-electrode
8.Uvavanyo lomngundo kunye novavanyo
9. Ukuvavanywa kwemveliso yovavanyo
1. Ukuqinisekiswa kweendawo ezifanelekileyo kunye neesampuli zokuvelisa
2. Ukuveliswa kwemveliso yokuqala yenqaku
3. Ukuhlolwa kwemveliso
4.Ukuhlolwa okupheleleyo kunye nokujonga indawo yokuhambisa
5. Ukulandelelwa komgangatho
Sineqela leQC, kunye novavanyo kunye nezixhobo zokulinganisa: Umatshini wokuLungelelanisa we3D noMatshini wokuvavanya umbala.
Iqela lethu lobungcali lokuthumela ngaphandle
IMestech isebenza namaqabane asuka kumazwe amaninzi iminyaka emininzi, senza ukungunda okuqhelekileyo kunye neemveliso zazo, kunye nenkonzo yokumisa. Siye sabona iqela lezorhwebo langaphandle. Bayayazi itekhnoloji yemveliso kwaye bangaxoxa ngoyilo, inkqubo, ishishini kunye nemithwalo yempahla kunye nawe ngesiNgesi. Banokuziqonda kakuhle iimfuno zakho kwaye bakubonelele ngexesha elifanelekileyo kunye neemveliso kunye neenkonzo.